လူတစ္ေယာက္၏ ပင္ကိုိယ္ စရိုက္တြက္ၾကည္႔႔နည္း - UpdateNew
စိိတ္ႀကီးတယ္ မဟုတ္မခံစိတ္မ်ားတယ္ မေတာ္မတရား လုပ္တာေတြ့ရင္ ကိုယ့္ကိစၥမဟုတ္လဲ ၀င္ပါဖို့ ၀င္ေၿပာဖို့ ၀န္မေလးတဲ႔သူ ေဘးကေန အလိုလို ေဒါသထြက္ေနတတ္တယ္ ။ စိတ္တိုေဒါသထြက္ရင္လဲ ဘာမဆို လုပ္ပစ္ေၿပာပစ္လိုက္မွေက်နပ္တဲ႔သူေပါ့ ။ စိတ္ကသာႀကီးပါတယ္ သူ့နွလံုးသားကေတာ့ ၿဖဴစင္လြန္းပါတယ္ ။
သူတစ္ပါးကို ေပးရမွာ ေကၽြးရမွာ ထိပ္ဆံုးကေပါ့ ။ဒါေပမဲ့ စိတ္ၿမန္ ေဒါသ ထြက္လြယ္တာေႀကာင့္ အႏၱရာယ္ အၿမဲ ရင္ဆိုင္ရတတ္တယ္။ စိတ္ၿမန္ပံုကေတာ့ ဖိနပ္စီးရတာ ခက္ေနရင္ေတာင္ ဖိနပ္ကိုကန္ထုတ္ ရန္လုပ္ၿပီး ဖိနပ္မပါပဲ ေလွ်ာက္သြာတတ္တဲ့ သူမ်ိဳး။ ကိုယ္ကို လာေစာ္ကားလာရင္လဲ ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္မလႊတ္ဘူး။ ၿဖစ္ခဲ့တာကို စဥ္းစားၿပီး စိတ္ထဲမွာ တစ္ႏံု့ႏံု႔နဲ့ ေတြးျပီး ႀကိတ္မနိုင္ခဲမရ ေဒါပြေနတတ္တယ္ ။
သိပ္ေတြေ၀တတ္တယ္ ဘယ္အရာမဆို ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို ပိုင္ပိုင္နိုင္ မခ်နိုင္ဘူး ။အရာရာကို ေမ့ေလွ်ာ႔ေနတတ္တယ္ ။ တစ္ခါတစ္ေလး ေငါင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔ ေငးေမာေနတတ္တာေတာင္ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္ ။ သီးသန္႔ေနလို့စိတ္ၿပင္းတယ္ ။ၿပသနာတစ္ခု တစ္ေယာက္ထဲ မေၿဖရွင္းနိုင္ဘူး ေၿမြမေသ ဒုတ္မက်ိဳး လုပ္တတ္တယ္ ။ အလြန္ေတာ္တဲ႔ ၿဖန္ေၿဖေရးသမာေလး။ ႀကား၀င္ေၿဖရွင္း ရမယ္ဆိုရင္ နွစ္ဖက္ႏွခြ ၿမင္တဲ႔သူ။ အေၿပာေအးေအးေလးနဲ႔ က်ေလာက္ေအာင္ ေၿပာတတ္တဲ႔သူ။ သူ႔၇ဲ႔ ရိုးပံုေအးပံုေႀကာင္႔ လူတိုင္းက ခင္ႀကတယ္ ။ သူကေတာ့ ေရာက္တဲ႔ေနရမွာ ေပ်ာ္ေအာင္ေနမယ္ ။
ၿပသနာေတြ႔ရင္ေတာင္ ဒါေတြကို ေမ့ေလွ်ာ႕ၿပီး ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ေနမဲ႔ သူပဲ ။ဒါ႔ေႀကာင္ဘာကိုမွ ေလးေလးနက္နက္ မရိွဘူးလို့ အထင္ခံရတတ္တယ္ ။ စကားသာ က်ေလာက္ေအာင္ေၿပာတာ တစ္ခါတစ္ေလ ေရွ႕ေနာက္မညီ ေၿပာၿပီးတာေတြ ေမ့တတ္ၿပန္တယ္ ။စိတ္ဓာတ္တတ္လြယ္ က်လြယ္တယ္ ။ အရာရာ မၿပတ္မသား ေႏွာင္႔ေႏွးလြန္းေတာ့ ဘ၀အခြင္႔အေရး ေတြ မႀကာခဏ လက္တစ္လံုးႀကား ဆံုးရံႈးရတတ္တယ္ ။ သူ႔ဘ၀ကို နိုင္နိုင္နွင္းနွင္း ပဲ႔ထိန္းေပတဲ႔ သူရိွမွ သူဘ၀က ဟန္က်မယ္ ။ ေနာက္ကတစ္ခ်ိန္လံုး လိုက္ေၿပာေနမွ တန္ရံုက်မွာ ။အေၿပာခံရလို့ စိတ္ဆိုးမွာေတာ့ မပူနဲ သူကဘယ္ေတာ့မွ မွတ္မထားလို့ပါ ။
သူကေတာ့ ေမတၱာ ရွင္ႀကီးေပါ့ ။အားနာတတ္တယ္ ၊ယံုစားလြယ္တယ္္ ၊သူတစ္ပါးအေပၚ ခြင္႔လြတ္နားလည္စိတ္ရိွတယ္ ။ သည္းခံစိတ္ရိွတဲံ႔ေနရမွာ နွစ္ေယာက္မရိွဘူး ေအာခ်ရေလာက္တဲ ႔ အထိေပါ့။ အရာရာကို ရင္ဆိုင္ရဲတယ္။လူသားအားလံုးအေ ပၚေလးေလး စားစား ဆက္ဆံတတ္တယ္ ။ကိုယ္႕ကိုယ္ကို အၿမဲ နွိမ္႔ခ်ေနတတ္တယ္ ။
ရန္သူအေပၚမွာေတာင္ေမတၱာထား ေတာ့ ေဘးလူေတြနာမလည္္ အားမလိုအား မရ ၿဖစ္တတ္ႀကတယ္။ဒါေပမဲ႔ ရန္သူကိုေမတၱာနဲ ႕ အဆံုးမွာ စည္းရံုးနုိင္တဲ႕ သူပါ ။စိတ္သေဘာထား ႀကီးတယ္ မဟုတ္တာ မလုပ္တဲ့သူ။ ဘယ္သူ႕ကိုမဆို တန္ဖို့းထားဆက္ဆံတတ္တယ္။အေၿပာသမားမဟုတ္ဘူး လက္ေတြ႕႔ဆန္တယ္ ။ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္တဲ႕သူ။ အခ်စ္ေမတၱာ အေပၚ အေလးအနက္ထားတယ္ ။ အခက္အခဲ ကိုရင္ဆိုင္ရရင္ေတာင္ ေမတၱာ ေရွ႔ထားၿပီး ေအာင္ၿမင္မႈကို ရယူတဲ႔သူ ပါ ။ အားလံုးသိပါတယ္ ေအာင္ၿခင္(8)ပါးကို ၿမတ္စြာဘုရားက ေမတၱာနဲ႔ ေအာင္ၿမင္ခဲ႕တာကိုေလ။
ရင္တဲမွာစာနာတတ္တယ္ ၊ ခံစားတတ္တယ္၊ ႀကင္နာတဲ႔စိတ္အၿပည့္ရိွေနတယ္ ။ သိပ္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္တယ္။ ခ်စ္သူခင္သူၿဖစ္ေစ သတၱ၀ါေတြကိုၿဖစ္ေစ “သနားပါတယ္ေနာ္´´ ဆိုၿပီး စာနာစိတ္နဲ႔ အၿမဲ ကူညီလို့စိတ္ရိွတယ္ ။သနားေအာင္ေၿပာရင္ ဘယ္ေလာက္စိတ္ဆိုးေနပါေစ ခြင္႔လႊတ္တယ္ ။ ဂရုဏာသမားမို့ ရန္သူကိုေတာင္ သနားတတ္တဲသူ ။စိတ္ဆိုးလဲ ခဏပဲ ။ရန္သူကို သူ႔ခမ်ာ ငါ႔ကိုတစ္ခ်ိန္လံုး ရန္လိုေနတာ သနားပါတယ္တဲ႔ေလ။ဒါေပမဲ သူကသူတစ္ပါးအေပၚ ဂရုနာထားသလိုသူ႕အေပၚမွာ ဂရုစိုက္မွ ေက်နပ္တတ္တဲသူ။ သူကိုဂရုမစိုက္ဘူး အေလးမထာဘူး အခ်စ္ေပါ့တယ္လို့ ထင္ရင္ စိတ္ေကာက္ၿပီး ၀ုန္းတိုင္းက်ဲ အရြဲ႔တိုက္တတ္သူ။
၀မ္းနည္းလြယ္တယ္ တစ္ဇြတ္ထိုူးလုပ္တတ္တယ္ ။ ငါေကာင္းသေလာက္ငါ႔အေပၚမေကာင္းဘူးလို့ စိတ္၀င္ ၀မ္းနည္းသြာၿပီဆိုရင္ အၿမန္ေလးသာ ေခ်ာ႔႕လိုက္ပါ ။လူပံုစံ စတိုင္၊ ဟန္ပန္က အစ ၿပဳမူေၿပာဆိုပံုက မာက်စ္က်စ္ ၊ဘုခြေၿပာ၊ မသနားတတ္တဲ႕ ႀကင္နာစိတ္မရိွတဲ႕ သူလိုအၿပင္ပန္းမွာ ေပၚေနတယ္ ။ တကယ္အတြင္းစိတ္ ရင္ထဲမွာေတာ့ ဂရုဏာ အၿပည့္ရိွတဲသူပါ ဂရုဏာႀကီးတဲ႕ ဟန္ေဆာင္ေနတဲ႕ သူနဲေတာ့ တၿခာစီေပါ့ ။သူ႕သေဘာ သူ႕သဘာ၀ သူ႕မေနာကိုသိတဲ႕ သူေတြကေတာ့ ေလးေလးစားစား နဲ႔ သူ႔အရိပ္ကို ခို၀င္ႀကတယ္ ။ ဦးေဆာင္သူ ၊ဆရာေတြ ၊ သမားေတာ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ကရုဏာရွင္ေတြေပါ့ ။
မုဒိတာကို လက္ကိုင္ထားနိုင္သူမ်ိဳးကေတာ့ ရွားပါးလွပါတယ္ ။သူကေတာ့ ရွားရွားပါးပါးထဲက သူတစ္ေယာက္မို့ လူတစ္ေသာင္းမွာ တစ္ေယာက္ေတြ႕ခဲလွတဲ႕ မုဒိတာ ပြားနိုင္တဲ႕ သူတစ္ေယာက္ေပါ့ ။သူတစ္ပါးေအာင္ၿမင္တာ ၊ခ်မ္းသာႀကြယ္၀တာ ၊ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ၿဖစ္တာ၊နာမည္ႀကီးတာ ၊ေငြရတာ ၊အလုပ္တိုးတတ္တာ ေတြ႕ရင္ ကို္ယ္ကပဲ ဒါေတြကို ခံစားေနရသလိုလိုနဲ႕ ပိတိၿဖာၿပီး ေဘးကေနႀကည္ႏူးေနတတ္တဲ႕ သူမ်ိဳး ဒီကမၻာမွား ရွားပါတဲသူေပါ့။ မနာလို ၀န္တိုစိတ္မရိွဘူးအတင္းအဖ်င္းမေၿပာတတ္ဘူး ၊ၿမင့္ၿမတ္တဲ႕ စိတ္ရိွတယ္ ။အရာရာ ရင္ထဲ ခံစားၿပီးမွ လုပ္တတ္ေၿပာတတ္တဲ့သူ ။မွန္ကန္ ၿမင့္ၿမတ္တဲ႕စိတ္ေႀကာင့္ေအာင္ၿမင္မႈထိတ္တန္းေရာက္တယ္။
ကိုိယ္က သူတစ္ပါးကို ေ၀ဖန္တိုက္ခုိက္တာ ၊သူတစ္ပါးကို ငယ္က်ိဳးငယ္နာ ေဖာ္ၿပီး ဒုကၡေပးတာမ်ိဳးလံုး၀မုန္းတီးတယ္ ။ ကိုယ္ကလဲ မလုပ္ဘူး၊လုပ္ရပ္ေတြကိုလဲ လက္မခံဘူး ။ေရွာင္ရွားတယ္ ။.သူတစ္ပါးအားနည္ခ်က္အားသာခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ခ်ီက်ဴးၿပီးေကာင္းတဲ႕ အၿပဳသေဘာေတြကို အႀကံေပးမႈေလးေတြေႀကာင့္ သူ႕ကိုခ်စ္ခင္သူေတြေပါတယ္ ။မနာလို၀န္တိုစိတ္မရိွပဲ သူတစ္ပါးအေပၚ မွ်ေ၀ခံစား တတ္လို့ ႀကီပြားေအာင္ၿမင္မွာ မလြဲပါဘူး ။အရာရာ အေပၚမွာ ရင္ထဲက လိႈက္လႈိက္လဲွလွဲ နဲ႕ ၿဖစ္ထြန္းေစသလို ကိုယ္တိုင္လဲ ေၿဖာင့္ေၿဖာင့္ မွန္ွမွန္နဲ႕အၿမဲႀကိဳးစားေနတဲ႕ ၿမင့္ၿမတ္တဲ ႕ နွလံံုးသား ပိုင္ရွင္တစ္ဦးပါ ။
အလြန္ထူးၿခားတဲ႕ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ေပါ့။ ဘာသိဘာသာ ေအးေအးေဆေဆးပဲ ေနတတ္တယ္ ။ သူုတစ္ပါးကိိစၥေတြကိုလဲ ကို္ယ္နဲ႕မဆိုင္ေအာင္ အၿမဲႀကိဳးစာေနတတ္တယ္။ ၀င္ၿပီး စြတ္ဖက္တဲ႕ သဘာ၀ ကင္းတယ္ ။ရန္သူကိုေတာင္ ေဒါသထြက္ၿပီး ရင္မဆိုင္ပဲ မသိသလို့ ကိုယ္႕ကို ရန္လုပ္တာ မဟုတ္သလို့ ခပ္မဆိတ္ေနတတ္တယ္။ ဥေပကၡာၿပဳ ေက်ာခိုင္းေနတတ္တယ္ တည္ႀကည္တည္ၿငိမ္ၿပီး လူးသားအာလံုးကို ကိုယ္စိတ္ကမွန္တယ္ထင္တာလုပ္ေနႀကတာပဲတဲ႕ ။ ဘာ၀င္စြတ္ဖက္စရာလို့လဲဆိုတဲ႕ သေဘာ ထားတတ္တယ္ ။ ကိုယ္႕ကိစၥနဲ႕ ဆိုင္တဲ႕ ၀န္းက်င္အလုပ္ကို စူးစူးစိုက္စိုက္ လုပ္တတ္လို့ ေအာင္ၿမင္ႀကီးပြားႀကပါတယ္ ။ ထူးၿခားခ်က္က အေနေအးၿပီး အရာရာ ကိုမသိဘူးမထင္နဲ႕ ။ အရာရာကို သိတယ္ ေလ့လာတယ္ ။ ပတ္၀န္းက်င္ကို အၿမဲ ေလ့လာေနတယ္ ။ၿဖစ္ေပၚလာတဲ႕ အေႀကာင္းဆက္ေတြအေပၚ နားလည္လြန္းလို့ အရာရာကို အၿပစ္မၿမင္ပဲ ေနတတ္တဲ့သူ ။
အခက္အခဲေတြ ၊ ဒုကၡေတြကိုိ သူ႕ဆီမွာ အကူညီေတာင္း ႀကည့္။ ကိုယ္႕ၿပသနာ တစ္ခုကို သူ႕ၿပသနာတစ္ခုလို လႈိုက္လႈိုက္လွဲလွဲ သေဘာထာၿပီး ကူညီမွာေသခ်ာတယ္ ။ကိုယ္နဲ႕ မပတ္သက္သမွ် ၀င္မပါဘူး။ ကိုယ္နဲ မိတ္ဆက္မေပးသမွ် မည္မွ်မ်က္မွန္းတန္းေနပါေစ ၿပံဳးၿပႏႈတ္ဆက္မွာမဟုတ္ဘူး ။ ယဥ္ေက်းတယ္ သိမ္ေမြ႔တယ္ ၊ အေရႀကံဳလာရင္ တကယ္အားထားရတယ္ ။ အကယ္ကို အၿမင္ႀကည္လင္တဲ႔ သူေတြေပါ့ ။တစ္ေန႔မွာသူဟာ ဘာသာ သာသနာအတြက္ တန္ဖိုးရိွတဲ႔လူတစ္ေယာက္ၿဖစ္နိုင္သူ ေတြလို့ ေရွးပညာရိွေတြက ဆိုပါတယ္ ။
လူတစ်ယောက်၏ ပင်ကိုယ် စရိုက်တွက်ကြည့့်နည်း
လူတစ်ဦးစီမှာ ပင်ကိုယ် `ဗီဇ´ လေးတွေ ပါလာတတ်ပါတယ်။ ပြင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့၊ကြိုသိထား။ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့်ပြီးရင် ခေါက်ရိုးကျိုးသွားပြီ။
(ဝ) လောဘကြီးသူ (အလိုဆန္ဒ ပြင်းပြသူ၊ အကျိုးရှိအောင်လုပ်)
(၁) ဒေါသကြီးသူ (လူတကာကို လိုက်ဆဲတတ်သူ ၊ ပြတ်သားသူ)
တွက်နည်းကတော့ လွယ်ပါတယ် ကိုယ်ရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်ရယ် ၊မွေးနံကို ဂဏန်းပြောင်းပြီး ပေါင်းပါ။ရတဲ့ အဖြေ (၇) နဲ့ စားရပါမယ် ထွက်လာတဲ့ အဖြေကတော့ ကိုယ့်ရဲပင်ကိုယ်စရိုက်ပေါ့ ။
ကဲ ! အောက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ စရိုက်လေးကို ကြည့်ကြတာပေါ့ ….
လိုချင်စိတ်များတော့ ဘာမဆိုလုပ်ရမှာ ဝန်မလေးသူပေါ့။ ချမ်းသာလိုတယ် ကြွယ်ဝလိုတယ် ချမ်းသာချင်ကိုလဲ ရမဲ့ သူ။ ဒါပေမဲ့ မှားလား မှန်လား တရားဝင်လားတရားမဝင်လားတွေးမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဒုက္ခတော့ တွေ့နိုင်တာပေါ့ ။
အကြွင်း (၁ ) ဒေါသ။
စိတ်ကြီးတယ် မဟုတ်မခံစိတ်များတယ် မတော်မတရား လုပ်တာတွေ့ရင် ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်လဲ ဝင်ပါဖို့ ဝင်ပြောဖို့ ဝန်မလေးတဲ့သူ ဘေးကနေ အလိုလို ဒေါသထွက်နေတတ်တယ် ။ စိတ်တိုဒေါသထွက်ရင်လဲ ဘာမဆို လုပ်ပစ်ပြောပစ်လိုက်မှကျေနပ်တဲ့သူပေါ့ ။ စိတ်ကသာကြီးပါတယ် သူ့နှလုံးသားကတော့ ဖြူစင်လွန်းပါတယ် ။
သူတစ်ပါးကို ပေးရမှာ ကျွေးရမှာ ထိပ်ဆုံးကပေါ့ ။ဒါပေမဲ့ စိတ်မြန် ဒေါသ ထွက်လွယ်တာကြောင့် အန္တရာယ် အမြဲ ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။ စိတ်မြန်ပုံကတော့ ဖိနပ်စီးရတာ ခက်နေရင်တောင် ဖိနပ်ကိုကန်ထုတ် ရန်လုပ်ပြီး ဖိနပ်မပါပဲ လျှောက်သွာတတ်တဲ့ သူမျိုး။ ကိုယ်ကို လာစော်ကားလာရင်လဲ ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ ဖြစ်ခဲ့တာကို စဉ်းစားပြီး စိတ်ထဲမှာ တစ်နုံ့နုံ့နဲ့ တွေးပြီး ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဒေါပွနေတတ်တယ် ။
အဲဒီစိတ်ကလေးကို ထိန်းနိုင်တဲ့ နေ့ရောက်ရင် ချမ်းသာကြီးပွားတဲ့ လမ်းပေါ်ကို စရောက်တဲ့နေ့ပါပဲ ။ ဘယ်သို့ဆိုစေ “လူဖြောင့်စိတ်တို´´ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အလွန်ရိုးဖြောင့်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ ။
သိပ်တွေဝေတတ်တယ် ဘယ်အရာမဆို ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင် မချနိုင်ဘူး ။အရာရာကို မေ့လျှော့နေတတ်တယ် ။ တစ်ခါတစ်လေး ငေါင်တောင်တောင်နဲ့ ငေးမောနေတတ်တာတောင်တွေ့ရတတ်ပါတယ် ။ သီးသန့်နေလို့စိတ်ပြင်းတယ် ။ပြသနာတစ်ခု တစ်ယောက်ထဲ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး မြွေမသေ ဒုတ်မကျိုး လုပ်တတ်တယ် ။ အလွန်တော်တဲ့ ဖြန်ဖြေရေးသမာလေး။ ကြားဝင်ဖြေရှင်း ရမယ်ဆိုရင် နှစ်ဖက်နှခွ မြင်တဲ့သူ။ အပြောအေးအေးလေးနဲ့ ကျလောက်အောင် ပြောတတ်တဲ့သူ။ သူ့ရဲ့ ရိုးပုံအေးပုံကြောင့် လူတိုင်းက ခင်ကြတယ် ။ သူကတော့ ရောက်တဲ့နေရမှာ ပျော်အောင်နေမယ် ။
ပြသနာတွေ့ရင်တောင် ဒါတွေကို မေ့လျှော့ပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်နေမဲ့ သူပဲ ။ဒါ့ကြောင်ဘာကိုမှ လေးလေးနက်နက် မရှိဘူးလို့ အထင်ခံရတတ်တယ် ။ စကားသာ ကျလောက်အောင်ပြောတာ တစ်ခါတစ်လေ ရှေ့နောက်မညီ ပြောပြီးတာတွေ မေ့တတ်ပြန်တယ် ။စိတ်ဓာတ်တတ်လွယ် ကျလွယ်တယ် ။ အရာရာ မပြတ်မသား နှောင့်နှေးလွန်းတော့ ဘဝအခွင့်အရေး တွေ မကြာခဏ လက်တစ်လုံးကြား ဆုံးရှုံးရတတ်တယ် ။ သူ့ဘဝကို နိုင်နိုင်နှင်းနှင်း ပဲ့ထိန်းပေတဲ့ သူရှိမှ သူဘဝက ဟန်ကျမယ် ။ နောက်ကတစ်ချိန်လုံး လိုက်ပြောနေမှ တန်ရုံကျမှာ ။အပြောခံရလို့ စိတ်ဆိုးမှာတော့ မပူနဲ သူကဘယ်တော့မှ မှတ်မထားလို့ပါ ။
သူကတော့ မေတ္တာ ရှင်ကြီးပေါ့ ။အားနာတတ်တယ် ၊ယုံစားလွယ်တယ် ၊သူတစ်ပါးအပေါ် ခွင့်လွတ်နားလည်စိတ်ရှိတယ် ။ သည်းခံစိတ်ရှိတဲံ့နေရမှာ နှစ်ယောက်မရှိဘူး အောချရလောက်တဲ့ အထိပေါ့။ အရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။လူသားအားလုံးအေ ပါ်လေးလေး စားစား ဆက်ဆံတတ်တယ် ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲ နှိမ့်ချနေတတ်တယ် ။
သူအနေနဲ့ ရိုးပေမဲ့ သွားအထင်မသေးပါနဲ့ သူ့မှာချစ်တဲ ခင်တဲသူတွေ အလွန်ပေါတဲသူပါ ။လမ်းလေဂျပိုး လူမိုက်ကအစ လုပ်ငန်းရှင်ကြီး အထိ သူ့ကိုခင်ကြတယ် ။အရေးအကြောင်းဆို ကူညီဖို့အသင့်ပဲ ။မြင့်မြတ်တဲံ့ စိတ်သဘောထား အပေါ် လူတိုင်းက နေရာပေး ဆက်ဆံကြတယ် ။
ရန်သူအပေါ်မှာတောင်မေတ္တာထား တော့ ဘေးလူတွေနာမလည် အားမလိုအား မရ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ ရန်သူကိုမေတ္တာနဲ့ အဆုံးမှာ စည်းရုံးနိုင်တဲ့ သူပါ ။စိတ်သဘောထား ကြီးတယ် မဟုတ်တာ မလုပ်တဲ့သူ။ ဘယ်သူ့ကိုမဆို တန်ဖို့းထားဆက်ဆံတတ်တယ်။အပြောသမားမဟုတ်ဘူး လက်တွေ့ဆန်တယ် ။အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တဲ့သူ။ အချစ်မေတ္တာ အပေါ် အလေးအနက်ထားတယ် ။ အခက်အခဲ ကိုရင်ဆိုင်ရရင်တောင် မေတ္တာ ရှေ့ထားပြီး အောင်မြင်မှုကို ရယူတဲ့သူ ပါ ။ အားလုံးသိပါတယ် အောင်ခြင်(8)ပါးကို မြတ်စွာဘုရားက မေတ္တာနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တာကိုလေ။
ရင်တဲမှာစာနာတတ်တယ် ၊ ခံစားတတ်တယ်၊ ကြင်နာတဲ့စိတ်အပြည့်ရှိနေတယ် ။ သိပ်ကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်တယ်။ ချစ်သူခင်သူဖြစ်စေ သတ္တဝါတွေကိုဖြစ်စေ “သနားပါတယ်နော်´´ ဆိုပြီး စာနာစိတ်နဲ့ အမြဲ ကူညီလို့စိတ်ရှိတယ် ။သနားအောင်ပြောရင် ဘယ်လောက်စိတ်ဆိုးနေပါစေ ခွင့်လွှတ်တယ် ။ ဂရုဏာသမားမို့ ရန်သူကိုတောင် သနားတတ်တဲသူ ။စိတ်ဆိုးလဲ ခဏပဲ ။ရန်သူကို သူ့ခမျာ ငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံး ရန်လိုနေတာ သနားပါတယ်တဲ့လေ။ဒါပေမဲ သူကသူတစ်ပါးအပေါ် ဂရုနာထားသလိုသူ့အပေါ်မှာ ဂရုစိုက်မှ ကျေနပ်တတ်တဲသူ။ သူကိုဂရုမစိုက်ဘူး အလေးမထာဘူး အချစ်ပေါ့တယ်လို့ ထင်ရင် စိတ်ကောက်ပြီး ဝုန်းတိုင်းကျဲ အရွဲ့တိုက်တတ်သူ။
ဝမ်းနည်းလွယ်တယ် တစ်ဇွတ်ထိုူးလုပ်တတ်တယ် ။ ငါကောင်းသလောက်ငါ့အပေါ်မကောင်းဘူးလို့ စိတ်ဝင် ဝမ်းနည်းသွာပြီဆိုရင် အမြန်လေးသာ ချော့လိုက်ပါ ။လူပုံစံ စတိုင်၊ ဟန်ပန်က အစ ပြုမူပြောဆိုပုံက မာကျစ်ကျစ် ၊ဘုခွပြော၊ မသနားတတ်တဲ့ ကြင်နာစိတ်မရှိတဲ့ သူလိုအပြင်ပန်းမှာ ပေါ်နေတယ် ။ တကယ်အတွင်းစိတ် ရင်ထဲမှာတော့ ဂရုဏာ အပြည့်ရှိတဲသူပါ ဂရုဏာကြီးတဲ့ ဟန်ဆောင်နေတဲ့ သူနဲတော့ တခြာစီပေါ့ ။သူ့သဘော သူ့သဘာ၀ သူ့မနောကိုသိတဲ့ သူတွေကတော့ လေးလေးစားစား နဲ့ သူ့အရိပ်ကို ခိုဝင်ကြတယ် ။ ဦးဆောင်သူ ၊ဆရာတွေ ၊ သမားတော်တွေ တော်တော်များများကတော့ ကရုဏာရှင်တွေပေါ့ ။
မုဒိတာကို လက်ကိုင်ထားနိုင်သူမျိုးကတော့ ရှားပါးလှပါတယ် ။သူကတော့ ရှားရှားပါးပါးထဲက သူတစ်ယောက်မို့ လူတစ်သောင်းမှာ တစ်ယောက်တွေ့ခဲလှတဲ့ မုဒိတာ ပွားနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပေါ့ ။သူတစ်ပါးအောင်မြင်တာ ၊ချမ်းသာကြွယ်ဝတာ ၊ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်တာ၊နာမည်ကြီးတာ ၊ငွေရတာ ၊အလုပ်တိုးတတ်တာ တွေ့ရင် ကိုယ်ကပဲ ဒါတွေကို ခံစားနေရသလိုလိုနဲ့ ပိတိဖြာပြီး ဘေးကနေကြည်နူးနေတတ်တဲ့ သူမျိုး ဒီကမ္ဘာမှား ရှားပါတဲသူပေါ့။ မနာလို ဝန်တိုစိတ်မရှိဘူးအတင်းအဖျင်းမပြောတတ်ဘူး ၊မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ရှိတယ် ။အရာရာ ရင်ထဲ ခံစားပြီးမှ လုပ်တတ်ပြောတတ်တဲ့သူ ။မှန်ကန် မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အောင်မြင်မှုထိတ်တန်းရောက်တယ်။
ကိုယ်က သူတစ်ပါးကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာ ၊သူတစ်ပါးကို ငယ်ကျိုးငယ်နာ ဖော်ပြီး ဒုက္ခပေးတာမျိုးလုံးဝမုန်းတီးတယ် ။ ကိုယ်ကလဲ မလုပ်ဘူး၊လုပ်ရပ်တွေကိုလဲ လက်မခံဘူး ။ရှောင်ရှားတယ် ။.သူတစ်ပါးအားနည်ချက်အားသာချက်ကို ဖော်ထုတ်ပြီး ချီကျူးပြီးကောင်းတဲ့ အပြုသဘောတွေကို အကြံပေးမှုလေးတွေကြောင့် သူ့ကိုချစ်ခင်သူတွေပေါတယ် ။မနာလိုဝန်တိုစိတ်မရှိပဲ သူတစ်ပါးအပေါ် မျှဝေခံစား တတ်လို့ ကြီပွားအောင်မြင်မှာ မလွဲပါဘူး ။အရာရာ အပေါ်မှာ ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လဲှလှဲ နဲ့ ဖြစ်ထွန်းစေသလို ကိုယ်တိုင်လဲ ဖြောင့်ဖြောင့် မှန်ှမှန်နဲ့အမြဲကြိုးစားနေတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ နှလံုံးသား ပိုင်ရှင်တစ်ဦးပါ ။
အလွန်ထူးခြားတဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်ပေါ့။ ဘာသိဘာသာ အေးအေးဆေဆေးပဲ နေတတ်တယ် ။ သူုတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုလဲ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်အောင် အမြဲကြိုးစာနေတတ်တယ်။ ဝင်ပြီး စွတ်ဖက်တဲ့ သဘာ၀ ကင်းတယ် ။ရန်သူကိုတောင် ဒေါသထွက်ပြီး ရင်မဆိုင်ပဲ မသိသလို့ ကိုယ့်ကို ရန်လုပ်တာ မဟုတ်သလို့ ခပ်မဆိတ်နေတတ်တယ်။ ဥပေက္ခာပြု ကျောခိုင်းနေတတ်တယ် တည်ကြည်တည်ငြိမ်ပြီး လူးသားအာလုံးကို ကိုယ်စိတ်ကမှန်တယ်ထင်တာလုပ်နေကြတာပဲတဲ့ ။ ဘာဝင်စွတ်ဖက်စရာလို့လဲဆိုတဲ့ သဘော ထားတတ်တယ် ။ ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဝန်းကျင်အလုပ်ကို စူးစူးစိုက်စိုက် လုပ်တတ်လို့ အောင်မြင်ကြီးပွားကြပါတယ် ။ ထူးခြားချက်က အနေအေးပြီး အရာရာ ကိုမသိဘူးမထင်နဲ့ ။ အရာရာကို သိတယ် လေ့လာတယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲ လေ့လာနေတယ် ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းဆက်တွေအပေါ် နားလည်လွန်းလို့ အရာရာကို အပြစ်မမြင်ပဲ နေတတ်တဲ့သူ ။
အခက်အခဲတွေ ၊ ဒုက္ခတွေကို သူ့ဆီမှာ အကူညီတောင်း ကြည့်။ ကိုယ့်ပြသနာ တစ်ခုကို သူ့ပြသနာတစ်ခုလို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သဘောထာပြီး ကူညီမှာသေချာတယ် ။ကိုယ်နဲ့ မပတ်သက်သမျှ ဝင်မပါဘူး။ ကိုယ်နဲ မိတ်ဆက်မပေးသမျှ မည်မျှမျက်မှန်းတန်းနေပါစေ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူး ။ ယဉ်ကျေးတယ် သိမ်မွေ့တယ် ၊ အရေကြုံလာရင် တကယ်အားထားရတယ် ။ အကယ်ကို အမြင်ကြည်လင်တဲ့ သူတွေပေါ့ ။တစ်နေ့မှာသူဟာ ဘာသာ သာသနာအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သူ တွေလို့ ရှေးပညာရှိတွေက ဆိုပါတယ် ။